Yiziphi Izici ze-Gmail? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 496
Ngokuhamba kwesikhathi i-Gmail wenze izinto eziningi ezintsha futhi ngalezo zizathu sizokukhombisa,
Ukubukwa kwengxoxo: I-Gmail ikuvumela ukuthi ubone onke ama-imeyili angenayo naphumayo, ungawaqinisekisa ngokuhlola ama-imeyili wakho wangaphambilini ukuthola ulwazi. Uma kwenzeka ungakwazi ukubona ngeso lengqondo lo mbono kufanele ufake:
Unika amandla noma ukhubaza inketho.
Hlehlisa ukuthumela: Uthumele i-imeyili ongasafuni ukuyenza, ukuze ukwazi ukuhlehlisa ukuthumela kufanele uthathe isinyathelo ngokushesha, bese uya esikrinini sobunxele bese uqhafaza ekuhlehliseni.
Omaka bokubaluleka: I-Gmail ikuvumela ukuthi ukhethe ukuthi yimaphi ama-imeyili ofuna ukuwamaka abalulekile nokuthi yimaphi angabalulekile. Ukuze wenze lo msebenzi kufanele usebenzise futhi ufake:
Tags: Zenza lula ukuphathwa kwenqwaba yeposi. Ungakwenza ngale ndlela elandelayo:
Iya kuzilungiselelo ezijwayelekile.
Iya kokukhethwa kukho kwe-Tags.
Khetha inketho oyifunayo.
Izigaba: Ama-imeyili ahlelwe ngokuzenzakalela futhi angangezwa ngezaziso, izinkundla, ezenhlalo noma ukukhushulwa. Indlela yokufinyelela kufanele ufake "Amathegi" ezansi.
Snuzela: Le nketho yenza i-imeyili ifihle kuze kufike isikhathi osifunayo, okungukuthi, iyanyamalala ebhokisini lokungenayo futhi singavela futhi ngesikhathi esifunwayo.
Hlela ukuthunyelwa: Uma udinga ukuthumela iposi elifika lapho ulidinga, ungalihlela ngokumane ucindezele umcibisholo oseduze kwenkinobho yokuthumela.
Ubumfihlo: I-Gmail ikunikeza le nketho eyenza ama-imeyili akho abe yimfihlo, ngokuvele:
Hlola inketho yokuphela kwesikhathi.
Shayela ikhodi yokufinyelela.
Bheka inketho engeke idluliselwe, ikopishwe noma enye.
Amathileyi Wokufaka Amaningi: I-Gmail ngalo msebenzi ungangeza kufikela kumapaneli webhokisi lemilayezo engenayo aqondiswe kokukhulu. Ungazenza ngale ndlela:
Iya kuzilungiselelo ezithuthukile
Iwindi le-Multiple Inbox lizokhonjiswa.
Uhlela lezo ozozengeza.
Izimpendulo ezichazwe ngaphambilini: Ungakha ama-imeyili amade futhi ungamaka impendulo uma ngaso sonke isikhathi kufanele ubhale impendulo efanayo. Ungakwenza ngale ndlela:
Iya kuzilungiselelo ezithuthukile.
Chofoza Izimpendulo Ezisethwe ngaphambilini.
Ama-imeyili angafundiwe: faka ilebula lombhalo: akufundiwe ewindini lokusesha.
Namathisela izithombe: Ngale nketho ungahudula izithombe namanye amafayela kuma-imeyili e-Gmail usebenzisa i-Chrome.
Hlanganisa i-Google Maps: ngalokhu ungafaka imephu emzimbeni womlayezo.
Umhumushi weGoogle: Ithuba elihle kakhulu i-Gmail ekunika lona lokuhumusha imiyalezo ye-imeyili.
Sebenzisa i-Google Amadokhumenti: Ikuvumela ukuthi wakhe imibhalo nganoma iyiphi i-imeyili. Imibhalo ehlanganisiwe nayo ingaguqulwa ibe yimibhalo ehambisanayo.
Sebenzisa Ikhalenda ye-Google: Ungathumela imiyalezo "ye-SMS" umsebenzi wayo uyi-alamu yesikhumbuzo.
Imeyili ebalulekile: Uzokwazi uku-oda ibhokisi lakho lokungenayo nomlando wama-imeyili akho, uwahlukanise futhi uwahambise kumathileyi ahlukene, ngokwesidingo onaso. Ungashintsha futhi ngezilungiselelo ze-imeyili ze-Gmail.
Uyenza kanjani ngokwezifiso i-Gmail yakho?